Abavelisi bezixhobo - Izixhobo zeTshayina zaseTshayina kunye nababoneleli
✭ Isigqubuthelo esingasemva seplastikhi sale fan senziwe ngezinto zeplastiki ze-PA66 + 30GF. Le nto yeplastiki iyamelana nokubola kunye nokuguga, kwaye ilungele ukusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo zemozulu.
✭ Le seti yokubumba iplastiki ithunyelwa kumazwe aseYurophu, kwaye ubomi bokungunda kufuneka bufike kuma-500,000 amaxesha. Izinto zokubumba zisebenzisa izinto ezilukhuni eziyi-1.2343, kwaye inkqubo yokubumba yentsimbi isebenzisa ubhedu lwegraphite. Ubume besikhunta senziwe ngombumba weepleyiti ezintathu, kwaye umjikelo wenaliti yimizuzwana engama-32. Olu luhlu lweeparameter zonke ziqwalaselwa ngeendleko zabathengi kuyilo lokungunda kunye nokuvelisa, ukuze uphumelele inzuzo yokuvelisa kangangoko kunokwenzeka kubathengi.
✭ Le nxalenye yeplastiki yeyona nto iphambili kumatshini wekhofi wecapsule, kwaye yeyona nto iphambili kumatshini wecapsule wekofu.
✭Izinto ezisetyenzisiweyo kule nxalenye yeplastiki yi-PA66 + 45GF, kwaye kukho izinto ezintathu eziphambili zeplastiki ekufuneka zidityaniswe nale nxalenye yeplastiki. Inxalenye yokutyibilika komatshini kunye nokudiliza ikofu yephilisi ayinakwahlulwa yile nxalenye yeplastiki.
✭ Izinto eziluncedo azikho lula ukukhubazeka, ukuzinza okuhle, ukuchaneka okuphezulu, ukuqinisekisa ukuba umatshini wekofu uzinzile ngexesha lomsebenzi kunye nokunciphisa ingxolo.
✭Olu hlobo ngumngundo wemveliso yenkampani yethu, ebonelela ikakhulu ngeenkonzo zeplastikhi kubenzi bomatshini bekhofi. Umthamo wemveliso yale seti yokubumba ngama-800 ngosuku.